Xaggee laga helaa qalabka muhiimka ah ee Amazon keyword loo heli karo bilaash ah?
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan ku shaqeynayay qaar ka mid ah cilmi-baarisyo user-oriented ah si ay ugu dambeyntii ku qeexaan. Su'aashu waxay ahayd - waa suurtagal ku filan si loo helo hufnaanta wax soo saarka ee Amazon oo kaliya iyada oo la adeegsanayo qalabka muhiimka ah oo bilaash ah, si kale loo dhigo, oo la heli karo helitaanka furan internetka. Jawaabta gaaban waa haa, waa. Run ahaantii, waxaad si weyn u wanaajin kartaa waxqabadka guud ee ganacsigaaga macaamiisha ee Amazon adigoo isticmaalaya qalabka muhiimka ah ee lacag la'aanta ah, ama ugu yaraan qaybta aasaasiga ah ee aan la heli karin iyada oo aan la bixin lacagaha bil kasta ah ee dhibta, ama lacagta dhabta ah ee hal mar ah . Halkan waa waxa aan u hayo dareenkaaga, oo aan u sheego markale mar kale - Waxaan ku taxaya dhammaan qalabka muhiimka ah ee Amazon leh isticmaalka bilaashka ah oo wali ah natiijooyinka fulinta oo keliya. Haddaba, aan ugu dambeyntii eegno mid kasta oo iyaga ka mid ah.
SEO Stack - waa barnaamij loo adeegsado internetka oo weli wali lagu jiro. Si kastaba ha ahaatee, waxay mar horeba kuu soo bandhigi kartaa adeegyo wanaagsan oo wanaagsan oo soo saaro ereyada muhiimka ah, falanqaynta tartanka muhiimka ah ee Amazon, iyo helitaanka talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan ereyada ugu muhiimsan ee muujinaya iyo weedhaha dhererka dheer si aad u hagaajisaan liiskaaga liiska sida pro.
AMZ Sistrix - dhinaca ugu xooggan ee boggan internetka waa xawaaraha iyo isticmaalka lebiska. Waxaan loola jeedaa inaad isticmaali karto System-ka AMZ si ay kuugu siiso falanqaynta aasaasiga ah ee muhiimka ah ma aha oo keliya Amazon laakiin Google iyo eBay sidoo kale. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad buuxisid erey door ah - inta kale ayaa laguu qaban doonaa, si dhakhso ah, si fudud, iyo dabcan bilaash.
Sayniska sayniska - guddi internetka ah waa antipode dhamaystiran oo ah mid hore loo soo sheegay. Waxaan ula jeedaa in aan ka duwaneyn qalabka sahlan oo fudud, Sayniska Sayniska waa mid gaabis ah sidaa darteed xitaa hal shaqo oo cilmi baaris ah ayaa qaadan kara saacad dhan. Si kastaba ha noqotee, mareegtan waxay qabataa shaqada oo ay habka hawsha u qabataa si qurux badan iyada oo aan wax kharaj ah oo lacag ah.
Sonar - waa qalab kale oo muhiim ah oo Amazon keyword isticmaal ah. Dhab ahaantii, waxay u muuqataa sida kordhinta Google in ay noqoto mid sax ah. Si kastaba ha ahaatee, Sonar wuxuu ku tiirsan yahay raadinta culeyska iyo taxadareynta algorithmka si loo helo dhamaan ereyada muhiimka ah ee loo adeegsado dukaamada guryaha ee suuqa xaafadda. Sababaha qaar waxaan maqli karaa in aysan u haysanin astaamaha horumarsan, waxay sheeganeysaa wakhti gaar ah oo ka soo jeeda dhinaca iibiyaasha ganacsiga ee khibrada leh. Laakiin waxaan si buuxda u diiddanahay, sababtoo ah Sonar ayaa si fiican iila soo shaqeysay, ugu yaraan waxkasta oo xog ah oo la helay.
Qorshaha Keyword Key Google - si dhab ah, majiraan majiraan, iyada oo mowqifka aasaasiga ah ee internetka ee ay bixiso hay'adda raadinta aduunka ee laga yaabo inay tahay xalka ugu fiican ee loo heli karo milkiilayaasha ganacsiga iyo websaydhada da'da dugsiga sida had iyo jeer. Sidii ay sanado badan ku jirtay, Google AdWords wuxuu awood u leeyahay inuu kaa caawiyo inaad ogaato ereyada ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee la taageeray fikradaha la midka ah (iyada oo aan loo eegin ujeedada - ha ahaato alaabooyinka ku qoran Amazon, ku filan) Source .